I-Cofttek yinkampani yobungcali esele ikwimakethi ukusukela ngo-2012 kwaye iyaziwa ngeemveliso zayo ezikumgangatho ophezulu. Eyona nto intle malunga noku kongezwa kukuba ayinayo i-gluten kwaye ayiqulathanga zinto ziphikisayo. Ke, abantu abachaphazeleka kwiindidi ezahlukeneyo zezinto ezaliwa ngumzimba bangaluthatha uncedo ngaphandle kokuphulukana noxolo lwengqondo. Isongezelelo seCofttek PQQ yenye yezona zinto zibalaseleyo zePyrroloquinoline Quinone yongeza ...
Eyona Nyango yokuLuphala yokuGuga yeNicotinamide Mononucleotide (NMN) (2021)
Emva kophononongo lowama-2019 kugqityiwe ukuba iNicotinamide Mononucleotide ikhuselekile ekusetyenzisweni ngabantu ukuba ukusetyenziswa kwayo kuthintelwe kumda obekiweyo, iinkampani ezininzi zemveliso zingene kwimarike kunye neminikelo yazo. Oku kugqithisela ekukhetheni kushiye abathengi bedidekile malunga nokuba yeyiphi iNictonimade Mononucleotide (NMN) eyongezelelekileyo ebalungeleyo. Ngokoluvo lwethu, olona nyango lulungileyo lokuguga lweNicotinamide ...